Ifektri Yokugqoka - China Abakhiqizi Bethebula Lokugqoka, Abahlinzeki
YF-T19 Isibuko Esigoqiwe Esimnyama
Okuphezulu kunamagumbi amathathu ane-flip-top mirror esigabeni esiphakathi. I-flip-top cubby ohlangothini ngalunye lwento engenamsebenzi inikeza isikhala esiningi sokugcina izimonyo noma izinto zokugeza zangasese.
YF-T13 isicwebezelisi High Mirror Phambili phezulu Phakamisa Vanity Setha
Yenziwe ideskithophu ehlanzekile, ebushelelezi nemilenze egobile, lesi sethi samanje sokwenza ize sifana nesihlalo esithandekayo nesibuko esihle ngokuphelele ukukhipha ubuntu obunomusa! Ngokuqedwa kwegolide elikhanyayo nesibuko esiyindilinga, le ngcezu inikeza umklamo odonsa amehlo.
I-YF-T7 Makeup Vanity TableLarge Mirror & Cabinet & DrawerTribesigns Vanity Makeup Ithebula
Idizayini eyingqayizivele yesitayela, iza nokuyize, isibuko sokugqama esiguquguqukayo, indle ehlanganisiwe kanye nomhleli wezimonyo wamahhala. Ize inamakhabethe amabili avulekile angahlalisa okubalulekile kokuyize kwakho nobucwebe. Leli thebula elingenalutho kanye nesethi setool lingasetshenziswa ekamelweni lakho lokulala, endlini yangasese, ekhabetheni noma ephasishi.
Ithebula le-YF-S1 Oak Compact Vanity
Sizibophezele ekwakheni itafula lezimonyo elibucayi nelisebenzisekayo futhi sikunikeze ukukhetha okungcono. Lesi setha setafula lezimonyo elimhlophe senziwe ngezinto ezisezingeni eliphakeme ukwenza ngcono ukuqina nokuqina 100%…
YF-T24 ubucwebe ikhabethe EBEDROOM VANITY
Idizayini engenakulinganiswa enemigqa ehlanzekile, netoni elimhlophe noluhlaza okotshani kunika i-vibe yesitayela nokho enhle ekhaya lakho. Itafula lokugqoka elihle elinikezelwe endaweni yonke yabesifazane.
YF-T23 Abadwebi abakhulu Makeup Vanity + TV stand cabinet
I-vanity set is multifunctional as a TV stand with Flip Up mirror phezulu.
Ukusebenza okuningana-Kunesikhala esanele sokwenza izimonyo kwansuku zonke nokulungisa izinwele ngamadoti ama-2 namasheluvu ama-4. Itafula futhi lingasetshenziswa njengesitendi se-TV
I-YF-T22 ikhabethe lesitayela futhi elisebenzayo le-TV
Itafula elingenalutho lesitayela sokhuni olucwebezelayo futhi isitulo kulula ukufanisa ukuhlobisa kwakho kwasekhaya, itafula lethebula linomphetho omhlophe ohambisana nesisekelo segolide se-trestle.
YF-T21 isicwebezelisi High Makeup Vanity + TV ukuma iKhabhinethi
Isethi yamampunge isebenza njengendawo yokuma ye-TV enesibuko se-LED ngaphezulu.Lesi sambatho esihlakaniphile, sesimanjemanje esinezitulo ezifanayo, siyindlela enhle yokulala ekamelweni lesimanje.
YF-T20 Large Makeup Vanity + TV stand iKhabhinethi
I-vanity set is multifunctional as a TV stand enesibuko se-LED ngaphezulu.
Itafula elingenalutho lezinkuni ezimhlophe ezicwebezelayo futhi isitulo kulula ukufanisa ukuhlobisa kwakho kwasekhaya Itafula letafula elibanzi linendawo eningi yabahleli abancane, izitshalo, noma inkomishi yamabhulashi.
YF-T18 ikunikeza isikhala esanele velvet okuyize
Ukwakhiwa kwensimbi, imabula eyimbumbulu, ukhuni oluqinile nesikhumba se-PU kuqinisekisa ukwesekwa okuqinile, ukusetshenziswa okuqinile nokuhlangenwe nakho kokunethezeka eminyakeni ezayo. Leli thebula elinemigqa ehlanzekile, isiphetho esifakiwe, ne-Hollywood Mirror isetha izindawo ezinamandla, kepha ezinesitayela, Isiteshi khona kanye ekhaya lakho.
Ithebula le-White Vanity Makeup elibekwe nge-Adjustable Brightness Mirror, iStool ehlanganisiwe kanye ne-Free Make-up Organiser. Ungakhetha ukukhanya okuhlukile ngokusho kwezigcawu ezahlukahlukene nokwakheka okuhlukile.